Imfashini - iBezzia | Bezzia
Imfashini ngokujwayelekile, konke kuhlobene nendlela abantu abagqoka ngayo ngaso sonke isikhathi, noma isethi yezitayela nezitayela abantu abazithola kulo mkhakha. Ngalesi sizathu, iBezzia ayikwazi ukungabikho kulo mhlaba, lapho kunezitayela zazo zonke izinhlobo nemikhiqizo yazo yonke imibala, ngakho-ke sinethemba lokuzibandakanya zonke.
Sizobakhona nase- ama-catwalks, izindaba zomkhakha, sizolandela izindaba zamagama afanele alo mhlaba futhi sizokukhombisa ngezibonelo ukuthi yimaphi amamodeli okufanele uwalandele futhi iyiphi ongayilandeli.
Ekugcineni, sizolandela isibonelo sosaziwayo abathola izimfihlo zendlela yabo yokugqoka futhi sizozama ukukopisha izingubo zabo.
Por UMaria vazquez kwenza Izinsuku ze-3 .
Amahembe kanye namahembe asevele enqoba eZara
Por USusana godoy kwenza Izinsuku ze-6 .
Sesivele sifikile enkathini entsha futhi nayo, ukucabanga ngokubukeka kwemfashini okulandelayo. UZara ubukeka sengathi ...
Iziketi ze-denim zibuyisa indawo yazo kulokhu kuwa
Por UMaria vazquez kwenza Izinsuku ze-7 .
Sizibonile ezinhlwini ze-Adolfo Dominguez, iMango neZara, phakathi kwamanye amafemu. Iziketi ze-denim zibonakala zifuna ...
Iqoqo elisha le-capsule elivela kwaZara ngokubambisana noKassl
Por UMaria vazquez kwenza Isonto eli-1 .
UZara usanda kwethula i- "Kassl Edition", iqoqo elisha le-capsule elizodalula iziphakamiso kubantu abaningi emhlabeni jikelele ...
Ukwindla kuyasondela kepha kusekhona izinsuku eziningi, uma kungenjalo ehlobo, ngamazinga okushisa amnandi esesishiyile ...
Kukhona izesekeli eziyisisekelo bese kuthi izesekeli zomkhuba okuyizinto esizobona kusizini ngayinye. Kepha kulokhu…
Por UMaria vazquez kwenza Amaviki angu-2 .
Abantu Bamahhala badaya lokhu kuwa ngombala
Uma ubucabanga ukuthi ukwindla kuzosiphoqa ukuthi sibuyele kuphalethi yombala odabukisayo, ongathathi hlangothi futhi omnyama, ubungalungile! ...
Izitayela ngamathoni ansundu nangomhlaba we-Autumn
UToso uveza ukuthi umbala onsundu nowomhlaba, ngokujwayelekile, uzoba nendima enkulu ngesizini ezayo. Futhi yize ngokusemthethweni ...
Por USusana godoy kwenza Amaviki angu-3 .
UParfois wamukela uSepthemba ngokubuyela emsebenzini
Por UMaria vazquez kwenza Amaviki angu-3 .
UParfois umemezela ukuthi usukulungele ukubhekana noSepthemba. Ikwenza lokho ngendlu entsha yokushicilela ye-Back To Work, yayo ...
Ungaba kanjani intombazane yaseTumblr
Ukubuyekezwa kwemfashini yama-90s
Ukubuyekezwa kwemfashini yama-60s
Ugqoka kanjani emshadweni wosuku
Ukuhamba ngemfashini yama-80s
Imfashini kusuka kuma-50s, isitayela esihlala sibeka izitayela
Imfashini eminyakeni yama-70s
Amaqhinga okuhamba ngezithende
Dizayina eyakho ingubo
Izingubo zephathi ezinesitayela